Kuboshwe uthisha ngelocansi - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe uthisha ngelocansi
Kuthiwa ushaye indlwabu phambi komfundi (13)
ZIMKHALELE uthisha oku-thiwa ubebambe itoho eMabutho Primary School, eNsuze, eNdwedwe, osolwa ngokuphoqa umfundi (13) ukuba ambuke eshaya indlwabu waze wafika kuvuthondaba.
Lo thisha (24), esingeke simdalule okwamanje ngenxa yokulawu-lwa wumthetho, kubikwa ukuthi ushaqwe yimbokod’ebomvu ngo-Lwesihlanu ngenxa yokugila lo mkhuba ephindelela enganeni.
Ngokuthola kweLANGA, sekunesikhathi eside lo thisha elandela le ngane, eyicela ukuba imvezele iphenti ukuze ezobona ukuthi ifake elinjani. Kubikwa ukuthi ubejwayele ukuyikhipha ekilasini, ayithume ehhovisi ukuba iyome-nzela okuthile kanti ufuna ukuyi-gila.
Kuthiwa kwesinye isigameko, uke wayikhombisa i-video yocansi, wayicela nokuba iye endlini ya-ngasese imshuthele isitho sayo sangasese ukuze ezosibona.
Ekhuluma neLANGA uyise we-ngane – ongeke adalulwe ukuyivi-kela – uthe indodakazi yakhe iba-tshele le nto kade begodukile, kwazise yena nomkakhe kabahlali nayo ngenxa yomsebenzi.
Uthi imtshele ukuthi lo thisha bekunezikhawu eziningana lapho ebeyicela ukuba imgovozele ukuze ezobona ukuthi ingqoke iphenti elinjani.
“Okokuqala wayithuma ukuba iyomfudumezela ukudla kwakhe okuthe isihambile wayilandela. Ufike lapho ibiyofudumeza khona wayifica ihleli phansi, wayibuza ukuthi igovozeleni. Uthe kuyo ayadela ama-microwave akwazi ukubona izinto ezingale, wabe esecela ukuba igovoze khona naye ezobona ukuthi ifake iphenti eli-njani.
“Ingane yenqabile, wayicela ukuba uma esefika ekilasini efu-ndisa, ucela imgovozele ukuze ezobona ukuthi ifake nhloboni yephenti. Kuthe uma sebesekilasini, waya kuyona wayihlebela ukuthi ivule imilenze, nakhona yenqaba. Esigamekweni sokugcina, inga-ne ibiyolanda amaphepha ehhovisi, wafika wayicela ukuba ikhuphule isiketi ukuze ezobona iphe-nti, yenqaba.
“Uyinikeze amaphepha anga-phelele okuthe uma ifika ekilasini kwafanele iyolanda amanye. Ithe isingaphakathi la ebiyolanda khona amaphepha, wakhumula ibhulukwe waveza isitho sangasese, wacela ukuba iveze isikhindi sangaphansi ukuze ezozithokozisa. Yingaleso sikhathi eshaye khona indlwabu waze wafika kuvutho-ndaba, ngaleso sikhathi ingane ilinde amaphepha,” kusho yena.
Uthi okumcasule kakhulu wukuthi ingane yakhe ilubikile udaba esikoleni kodwa yatshelwa ukuthi ingaqale isho kubo kusazokhulunywa nesigungu esilawula isikole.
“Ngisho uthishanhloko ubelwazi udaba, kodwa akekho ongishayele ucingo njengomzali angazise ngo-kuhlukumezeka kwengane yami esikoleni. Ngiyile esikoleni, lo thisha wangitshela ukuthi ngehli-se umoya sixoxe. Ngimtshele ukuthi kayikho into engizoyikhuluma naye ngabe sengiya emaphoyiseni.
“Ungilandelile eyongincenga sengisesiteshini samaphoyisa, engitshela ukuthi uzothumela oninalume ekhaya kuyoxoxwa ngalolu daba. Kukhona konke lokhu, ngisigxeka kakhulu isikole nothi-sha ngobudedengu ababenzile ngokuthula nento engaka ingane isibatshelile ngokuhlukumezeka kwayo,” kusho yena.
Ikhansela lakule ndawo, uMnu Nkosinathi Maphumulo, lithe beselizwile ngalesi sigameko. Lithe lolu daba ludumaza kakhulu kanti like laxhumana nelungu lekomidi endaweni ukuba lilula-ndele.
Okhulumela uNgqongqoshe we-zeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe umnyango ubungakezwa ngalolu daba, wathi konke bazokuyekela ezandleni zamaphoyisa.
“Umnyango uhlale ukugcizelela ukuthi kawuhambisani nothisha abaziphatha ngale ndlela, kodwa-ke njengoba udaba selufinyelele emaphoyiseni, konke sizokubeka kuwona,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe ukhona umsolwa oneminyaka ewu-24 ubudala oboshiwe ngecala lokunukubeza ngokocansi kanti uvelile eNkantolo yeMantshi yaKwaMaphumulo ngoMsombuluko.
Ugcinwe esitokisini, uzobuyela enkantolo namuhla ngoLwesine ukuyofaka isicelo sebheyili.
Previous articleUfele ekhweni “obeyoqotha”
Next articlekuxabene ubendle kwi-da